Douglas Costa → Bayern Munich, Marco Verratti → Ac Milan, Alexis Sanchez → Chelsea Diego Costa → Ac Milan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku – Kooxda.com
Home 2017 June Suuqa, Wararka Maanta Douglas Costa → Bayern Munich, Marco Verratti → Ac Milan, Alexis Sanchez → Chelsea Diego Costa → Ac Milan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
Douglas Costa → Bayern Munich, Marco Verratti → Ac Milan, Alexis Sanchez → Chelsea Diego Costa → Ac Milan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
June 15, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Wanaagsan oo wacan Akhrisayaasheena sharafta iyo Qiimaha leh ee aan jecelnahayow ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii maalin laha ahaa ee aynu ku soo bandhigi jirnay wararka ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee ay wargaysada caalamku ka qoraan suuqa kala iibisga.
Wali ma furna suuqu kooxna waxba lama soo wareegi karto laakiin kooxaha ayaa dhiisha guntiga isaga xiraya una diyaar garoobaya sidii ay suuqa uga soo iibsan lahaayeen xiddigo ay xilli ciyaareedka dambe ku dagaalamaan.
Kooxaha ayaa heshiiyada la furi kara xiddigaha iyo kooxohooda heshiis Afka ahna la sii meel dhigi kara laakiin saxiixa ayaan dhici karin ilaa laga gaarayo bisha July1-deeda.
Weeraryahankii hore ee kooxda Arsenal iyo Man City ee Emmanuel Adebayor ayay doonaysaa kooxda ka ciyaarta horyaalka Premeir league ee Swansea (Daily Mirror).
Heshiiska uu Alvararo Morata ugu biiri doono kooxda Man United ayaa la filayaa in uu gaba-gaboobo bilowga todobaadka dambe (Daily Mirror).
Kooxda Roma ayaa Dhigeeda Liverpool u sheegtay in ay 10 Milyan ku darto dalabkeedii 26 Milyan ahaa oo ay hesho Mohamed Salah ama ay iska ilowdo saxiixiisa (Daily Mirror).
Xiddiga garabka uga ciyaara xulka qaranka Brazil iyo Kooxda Bayern Munich Douglas Costa ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay in uu doonayo in uu xagaagan ku biiro kooxda Juventus (Daily Mail).
Rajadii ay Barcelona ka qabtay helitaanka saxiixa Marco Verratti ayaa sii fiicnaanaysa xilli xiddigan kooxdiisa PSG ku qasbi doono in Barcelona laga iibiyo (The Sun).
Kooxda chelsea ayaa dhigeeda Liverpool u sheegtay in ay 10 Milyan Miiska saaraan hadii ay doonayaan saxiixa Weeraryahanka da,yarka ah ee Dominic Solanke (The Sun).
Jose Mourinho ayaa sheegay in uu kaliya saxiixa Daafaca Monaco ee Fabinho u dhaqaaqi doono hadii uu ku fashilmo saxiixyada Eric Dier ama Nemanja Matic (The Sun).
Walaalka la dhashay Diego Costa ayaa sheegay in uu weeraryahanka kooxda chelsea haysto dalabyo badan si uu uga tago kooxda difaacanaysa horyaalka xagaagan (The Independent).
Arsenal ayaa wax walba u samayn doonta sidii ay Alexis Sanchez uga hor istaagi lahayd in uu ku biiro kooxda ay premier league ku xafiiltamaan ee Man City (The Independent).
Kooxda Ac Milan ayaa kor u qaaday dalabkii ay ku doonaysa weeraryahanka xulka qaranka Italy iyo Kooxda Torino ee Andrea Belotti (Il Gallo).
Kooxda Inter Milan ayaa kooxda Juventus ku ciriirinaysa saxiixa Goolhayaha xulka qaranka Poland iyo Kooxda Arsenal ee Wojciech Szczesny (Football Italia).
Weeraryahanka kooxda Arsenal ayaa u sheegay maamulka Arsenal in uu doonayo in uu xagaagan ku biiro kooxda difaacanaysa Horyaalka Premier league ee Chelsea (Independent).
Jorge Mendes oo wakiil u ah Diego Costa ayaa lagu soo waramayaa in uu adeega xiddigan u soo bandhigi doono kooxda Ac Milan inkasta oo ayna Milan Diyaar u ahayn bixinta mushaharkiisa waalida ah (Calciomercato).
Filed in: Suuqa, Wararka Maanta